March 2021 - Sainpwar
ကျီးပေါင်း ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ ခြေဆစ် လက်ဆစ် နာခြင်းတို့ အတွက်
ကျီးပေါင်း ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ ခြေဆစ် လက်ဆစ် နာခြင်းတို့ အတွက် ကျောင်းထဲ မှာ အပင်ကရှိနေတော့ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်တယ် ကျီးပေါင်းရောဂါအတွက် အလွန်ကောင်း ၊ဂေါတ်ရောဂါအတွက်လည်း အလွန်ကောင်း ၊ယူဒီးအက်စစ်များသူအတွက်လည်း အလွန်ကောင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းစတဲ့ လည်ချောင်းရောဂါအတွက်လည်း အလွန်ကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပါ။ ယူဒီးအက်စစ်များလွန်း၍ ခြေဆစ်လက်ဆစ်ကိုက်ခဲခြင်း ဖူးရောင်ခြင်း များကို နှစ်လုံး သုံးလုံးသောက်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားသူ ဒကာက လျှောက်ထား၍ ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးနည်းပြုလုပ်ပုံက ခပ်နုနုသင်္ဘောသီးတစ်လုံးကို ထိပ်ကဓားနှင့်လှီး ၍ အစေ့အနု […]
ဒီနေ့ညကစပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲများနှင့် သတိထားစရာများ….
Unicode ဒီနေ့ညကစပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲများနှင့် သတိထားစရာများ ဒီနေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်ကြမှာပါပဲ။ တချို့မှာ လေပြင်းကျတယ်။တချို့မှာ မိုးကျတယ်။ တချို့မှာ မြူထပ်တယ်။ ဒီလိုမျိုးပေါ့။ ဘာကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းနေကြသလဲဆိုတာကတော့ အခြားသောဆရာများ တင်နေကြလို့ အတော်များများ သိနေကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အခုကျနော်ပြောချင်တာက ဒီနေ့ညကနေစလို့ လေးညနဲ့သုံးရက်လောက်အတွင်းကို သတိထားကြပါ။ အိမ်တွင်းမှာ(အထူးသဖြင့်မိမိအိပ်တဲ့နေရာ)ကို တတ်နိုင်သမျှ လင်းအောင်ထားပါ။ ညနေမှောင်လို့ နေရောင်ပျောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကြွေပန်းကန်လုံးအသေးတစ်ခုထဲကို ဆားတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပြီး […]
တော်တော်တရားလွန်နေပြီ မခံစားနိုင်ဘူး ခေတ်စနစ်ရဲ့ဆိုးမွေကို လူတွေပဲ ခံရတာမဟုတ်ပါဘူး
တော်တော်တရားလွန်နေပြီ မခံစားနိုင်ဘူး😓 ခေတ်စနစ်ရဲ့ဆိုးမွေကို လူတွေပဲ ခံရတာမဟုတ်ပါဘူး ခေးတွေလဲ ရောယောင်ပြီး ဓါးစာခံဖြစ်ရပါတယ် ခေတ်ပျက်တော့ လူတွေ ငတ်ပြတ်လာကြတယ်။ အငတ်ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ ခိုးကြတယ်၊ လုကြတယ်။ ဒီကလေးတွေက သူတို့ဘာသာခြံထဲမှာ အေးအေးလူလူနေကြတာပါ။ ဒေသထုံးစံရဲ့ဆိုရိုးက ခွေးတွေကို အဆိပ်ချပြီးရင် သူခိုးကပ်တတ်တယ်တဲ့။ ဪ .. လူတွေ က်ရာဘုံဘဝမှာအေးချမ်းစွားအနားယူကြပါ ကလေးတို့ရေ ကလေးတို့ကိုအမြဲတမ်းလွမ်းဆွတ်နေမယ့် Hooman Mama Youne Thiri Kyaw crd zawgyi version […]
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ “Miss Grand International 2020” ပြိုင်ပွဲကြီး မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အလှမယ် ဟန်လေးဟာ Top 20 အထိသာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ အခွင့်အရေး တခုအနေနဲ့ “Stop The War & Violence” ခေါင်းစဉ် နဲ့ မြန်မာပြည်က လက်ရှိ စစ် အာဏာရှင်များရဲ့ အကြမ်း ဖက်မှု […]
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ရင် ချစ်ရတဲ့ဇနီးအတွက် ကြိုပြီးရေးသားခဲ့တဲ့ ဦးကျော်ထူးရဲ့ သေတမ်းစာ
ပရိသတ္ႀကီး ေရ.. အႏုပညာေလာက မွာ ဟာသ ဇာတ္႐ုပ္ေတြ နဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို အျမဲရယ္ေမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစ ခဲ့တဲ့ ဟာသ လူရႊင္ေတာ္ ဇာတ္ပို႔ သ႐ုပ္ေဆာက္ဦးေက်ာ္ထူး ကေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေန ေတြမွာ ျပည္သူေတြ နဲ႔ အတူ ရပ္တည္ ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေတြကို တက္တက္ ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဦးေက်ာ္ထူး ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အစပိုင္းက […]
မတည့်တာကိုမှ စားချင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားနည်းမျာ
မတည့်တာကိုမှ စားချင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားနည်းများ ဒီပို့လေးကို ဖတ်ထားပြီးရင် သင်ကြိုက်တာကို ကြိုက်သလောက် စားလို့ရပါပြီ ၁။ လက်ဖက်ကို အမြဲနိုင်တာ လျှက်ဆားဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေ၊ လေပွ၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် မဖြစ်အောင် လက်ဖက်သုပ်စားပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာရင် လျှက်ဆား၊ ကိုးပါးဆေး၊မဟာဖြေဆေး စတဲ့ လေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗမာဆေးတစ်ခုခုကို အနည်းငယ် လျှက်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ၂။ လက်ဖက်သုပ်၊ ဂျင်းသုပ် စတဲ့ အသုပ်စုံတို့ကို စားတဲ့အခါ ကြက်သွန်ဖြူ […]
ကပ်ဘေးဆိုက်တဲ့ အခါ ကာကွယ်ခြင်း…..
ကပ်ဘေးဆိုက်တဲ့ အခါ (၁) ငါးပါးသီလ မြဲခြင်း (၂) အသားငါး စားသုံးမူနည်းခြင်း (၃) ပရိတ်ရွှက်ပုံနေရာ ကျခြင်း တို့ဟာကပ်ဘေးကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ခြင်းပဲတဲ့ကပ်ဆိုက်တယ် ဆိုတာ လူသားတွေလောဘ၊ ဒေါသ ၊ မောဟတွေ များလို့သဘာဝတရားကြီးက ရပ်တန့်သွားအောင်ပညာပေးတာ…. ငါးပါးသီလ လုံခြုံအောင်စောင်ထိမ်းခြင်းရဲ့ အကျိုးကိုသိပ္ပံကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းလို့မရဘူးကမ္ဘာလောကဓါတ်ကြီးဟာ သတ္တဝါတွေရဲ့ ကံတရားအတိုင်း ဖြစ်တည်နေတာဘုရားရှင်တွေ မပွင့်တဲ့ အချိန် သာသနာပကာလမှာလည်းလူသားတွေ ငါးပါးသီလ လုံခြုံကြလို့ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ ဝဠာဟာကဆိုတဲ့ […]
အိမ်မှာ ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေးလိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်…
အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကေန ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝးလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ ပါတယ္ ေရွးေရွးတုန္ းကလည္း ေက်ာက္ေရာဂါ..ပုလိပ္ေရာဂါ.. ဝမ္းေရာဂါ အစရွိသျဖင့္ ကူးစက္လြယ္တဲ့ ေရာဂါဆိုးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကဘူးတယ္။ တ႐ြာလုံး ႐ြာလုံးကြၽတ္ ကူးကုန္ၿပီး လူေတြ အကုန္ေသၾကသတဲ့.. လူေတြေသေတာ့ မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြ ေပ်ာ္တာေပါ့.. သူတို႔ေတြ ေပ်ာ္ျမဴးၿပီး ႐ြာေတြထဲ ဝင္လာၾကသတဲ့ ႐ြာေတြ ထဲက လူတခ်ိဳ႕လည္း တျခားလြတ္ရာ ေရွာင္တဲ့ လူကေရွာင္..ေျပာင္းတဲ့ […]
ကပ်ဘေးကာလအတွင်း မဟာမြတ်မုနိမြတ်စွာဘုရားကြီးအား ဖူးမြော်ပြီး ကောင်းသောနိမိတ်များရ….ရှိနိုင်ကြပါစေ
ေအာက္ဆုံးတြင္ ဗီဒီယိုဖိုင္ တင္ေပးထားပါသည္။ မႏၲေလး မဟာျမတ္မုနိ ျမတ္စြာဘုရားအား ညပန္း ကလပ္ ေတာ္မ်ားဆက္ကပ္ပူေဇာ္ ဖူးေမွ်ာ္ ရသည့္ ကုသိုလ္ ထူးေၾကာင့္ ေဘးဘယာ ေဝးကြာေစ၍ အႏၲရာယ္ အေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၿပီး။ ပူပင္မူ႔ ေၾကာင့္ၾကမူ႔ မ်ား ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကကုန္သည္။ ေဟာႏၲဳ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ မြတ်စွာဘုရားအား ညပန်း […]
ကမၻာမွာဘယ္နိုင္ငံမွ မရွိတဲ့စ္ိတ္ထားေတြ ငါတို့ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတယ္ ျမန္မာျပည္ႀကီးအျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္ပါေစ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံးလည္းေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ မေန႔က ၂၉.၃.၂၁ ဆန္ၾကက္သြန္နီအာလူးင႐ုတ္သီးပုငါးေသတၱာပဲပင္ေပါက္ပဲျပားငါးတန္ဟင္းသီးဟင္ရြက္အစုံ ဒီေန႔ ၃၀.၃.၂၁ (Day10) ဆန္ဆီၾကက္သြန္နီအာလူးငါးေသတၱာငါးဟင္းသီးဟင္းရြက္အစုံ “လိုလၽွင္ယူ CRD unicode ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိတဲ့စ်ိတ်ထားတွေ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ် မြန်မာပြည်ကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်ပါစေ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးလည်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေ မနေ့က ၂၉.၃.၂၁ ဆန်ကြက်သွန်နီအာလူးငရုတ်သီးပုငါးသေတ္တာပဲပင်ပေါက်ပဲပြားငါးတန်ဟင်းသီးဟင်ရွက်အစုံ ဒီနေ့ ၃၀.၃.၂၁ (Day10) ဆန်ဆီကြက်သွန်နီအာလူးငါးသေတ္တာငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံ “လိုလျှင်ယူ CRD